फेरी अर्को दुखद खबर ! सरकारले लगायो ब्याक गियर : भारतको चर्को दवावपछि विषादी परीक्षण नहुने - Maxon Khabar
Home / News / फेरी अर्को दुखद खबर ! सरकारले लगायो ब्याक गियर : भारतको चर्को दवावपछि विषादी परीक्षण नहुने
फेरी अर्को दुखद खबर ! सरकारले लगायो ब्याक गियर : भारतको चर्को दवावपछि विषादी परीक्षण नहुने
काठमाडौं असार २०
सरकार तत्कालका लागी भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट पछि हटेको छ ।
भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि सरकारले विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नभएकाले स्थगितको निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ ।
नेपाल भारत सीमा नाकामा विषादी परीक्षण र क्वारेन्टाईनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णपछि मात्रै निकासी पैठारी नीतिको पूर्ण कार्यन्वयनमा जाने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याउको थियो । तर, भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो ।
नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भारतीय दूताबासले पत्र नै लेखेको थियो । सरकार आफैले बिना तयारी हचुवाको भरमा निती ल्याउने र निती ल्याउदा जनाताको स्याबसी पाएपनि एक पछी अर्को नितिहरुबाट ब्याक हुनुपर्दा सरकारको चर्को आलोचना भैरहेको छ ।